Dowladda Sacuudiga Oo Sii Daysay Maalqabeenno iyo Amiirro Mucaaraday Bin Salmaan [Warbixin].
Saturday January 27, 2018 - 11:54:46 in Wararka by Super Admin
Dowladda Sacuudiga ayaa oodda ka qaadday tobaneeyo siyaasiyiin iyo ganacsato Maalqabeenno ah oo sanaddii lasoo dhaafay lagu xiray magaaladay Riyadh.
Ganacsato waaweyn iyo amiirro kamid ahaa xukuumadda ayaa lagasii daayay Hotelka caanka ah ee Ritz-Carlton oo ah hotel ay ku tamashleeyaan qoyska reer Boqor.
Warbaahinta Aala Sacuud waxay sheegtay in ganacsatada ladaayay uu kamid yahay Alwalid Ibraahiim oo ah milkiilaha shabakadda NBC iyo Nin amiir ah oo lagu magacaabo Khaalid Altuweyjiri oo horay usoo noqday madaxa diiwaanka Boqortooyada xilligii uu talada hayay Boqor Cabdalla Bin C/caziiz.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in lacago madax furasha ah ay bixiyeen illaa 11 amiir iyo ganacsato uu kamid ahaa Mutcab Bin Cabdalla wasiirkii hore ee ilaalada qaranka Sacuudiga.
Max’med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa amar ku bixiyay in kala bar hantida Shirkadda dhismaha Bin Laden dowladda lagu wareejiyo arrintaas oo ay diideen qoyska reer Bin Laden.
Sidoo kale Waliil Bin Dalaal oo kamid ah maalqabeennada adduunka ayaa markii ugu horraysay warbaahinta kasoo muuqday tan iyo markii lagu xiray Hotelka Ritz-Carlton wuxuuna sheegay in maalmaha soo socda xurriyadiisa uu heli doono kadib markii uu ogolaaday xal siyaasadeed oo udhigma in uu dhiibo lacago Ballaayiin dollar ah.
Wareysi uu siiyay wakaaladda wararka Reuters ayuu ku sheegay in si wanaagsan loola macaamilay xilligii uu xirnaa wuxuuna diiday in uu ka tanaasulay qaar kamid ah shirkadihiisa waaweyn.
Bin Dalaal ayaa beeniyay in uu ku lug lahaa musuq maasuq ay Boqortooyadu ku eedeysay isaga iyo wasiirrada lala xiray, Bin salmaan ayaa bishii November 2017 wuxuu dhisay hay’adda ladagaallanka Musuq maasuqa oo awood loosiiyay lawareegidda hantida dadka caanka ah.